Uhuru Kenyatta oo ku taliyey in Hawlagalka AMISOM la hoos-geeyo Hawlgalka Nabad-ilaalinta QM. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Madaxweynaha dalka Kenya oo haatan booqsho ku marayo dalka Jarmalka waxa uu hadalkaasi ka jeediyey mar uu la kulmay haweeneyda Ra’isul-wasaaraha ka ah dalkaasi, Angela Merkel, wuxuuna sheegay in ay Dowladaha Midowga Europe jareen Kharajkii Dhaqaale ee ay siin jireen Ciiddanka Hawlgalka AMISOM ee ku sugan Somalia.
“Lacagaha laga jaray Ciiddanka AMISOM, waxay noqon doontaa qalad qabri oo kale” ayuu yiri Madaxweynaha Kenya. Wuxuuna sheegay in loo baahnaa in la kordhiyo Maalgelinta AMISOM si la mid ah Hawlgalladda Nabad-ilaalinta ee QM.
Waxa kale oo uu sheegay inaay Kenya iyo Ururka Midowga Afrika taagan tahay in Hawlgalka AMISOM u baahan yahay Tagaeero buuxda oo ka timaada Xubnaha Beesha Caalamka ee la shaqeeya Hawlgalka AMISOM.
Sidoo kale, Madaxweynaha Kenya waxa uu Isniintii la soo dhaafay dhigiisa dalka Faransiiska, Francois Hollande kala hadlay Ajendaha AMISOM.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Kenya, Amina Mohamed oo ka mid ah Wafdiga la socda Uhuru Kenyatta ayaa sheegtay in waxa ka dhacayo Somalia waxyeeleynayso qeybo kale ee Caalamka.
Wareysi ay siiyey Idaacadda Capital News ee magaalladda Nairobi, waxay sheegtay in dhamaan Kooxaha ku sugan Somalia, Libya, Yemen, Syria ama Belgium inay isku xiran yihiin, isla markaana ay si wadajir ah u wada shaqeeyan.
Si kastaba ha ahaatee, Dowladda Kenya waxaa walaac xooggan ku haya Weeraradda ay Alshabaab ka geystaan gudaha Kenya, iyadoo ay Kumanaan Askar Kenyan ah ku sugan yihiin gudaha Somalia.
Bartamihii bishii Janaayo ee sanandkan, Alshabaab waxay weerar qorsheysan ku galeen Xero ay Ciiddanka Kenya kaga sugnaayeen Deegaanka Ceel-cadde ee Gobalka Gedo, waxaana halkaasi lagu dilay Askar badan oo Kenyan ah, iyadoo kuwo kalena ay Alshabaab qafaasheen.
Tiradda ay Alshabaab ku dileen weerarkaasi, waxay ku sheegaan in ka badan 100-Askari, walow ay Dowladda Kenya beenisay in Tiradaasi looga dilay Weerarkii Ceel-cadde.